Warshadda Inverter - Shiinaha Inverter -saareyaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha
· Wax -ku -beddelka ST -ga wuxuu ka badan yahay 85% · Naqshad cusub, la qabsado danab ballaaran oo ciriiri ah, si otomaatig ah u garta soo noqnoqoshada · Muujinta LED -ka oo buuxa, shaqada beddelidda waxaa loo dooran karaa iyadoo loo eegayo adeegsiga macaamilka · 3 hababka shaqada ayaa la heli karaa: mudnaanta koowaad, mudnaanta korantada, Habka badbaadinta tamarta · In ka badan 3 jeer awoodda ugu sarreysa ee bilawga ah, awoodda xamuulka oo aad u fiican · Taageere caqli badan (si otomaatig ah u hagaaji xawaaraha marawaxadda marka loo eego heerkulka gudaha)
Taxanaha EH9335 UPS waa saddex-gudaha ah, saddex-baxay/saddex-gudaha ah oo soo noqnoqoshada sare leh ee UPS-ka onlaynka ah. Awoodda badeecaddu waxay dabooshaa dhammaan baaxadda korantada ee 20kVA ilaa 80kVA, taas oo ku habboon adeegsadayaasha inay u dejiyaan dabacsanaan. Taxanahan UPS wuxuu xallin karaa ku dhawaad ​​dhammaan dhibaatooyinka korantada, sida korontada ka go'day, korantada sare ee magaalada, korantada hoose ee magaalada, hoos u dhaca korantada, yareynta baaxadda, Dhibaatooyinka korantada sida garaacyada korantada sare, isbeddelka korantada, hirarka kororka, dhalan rogga harmonic, qashin faragelinta, iyo isbeddellada soo noqnoqda.
Inverter EP2000 PRO UPS nidaamka baytariga
Beddelka taxanaha EP2000 PRO waa mid wax ku ool ah, caqli badan oo leh UPS. LCD-ga oo dhammaystiran wuxuu bixiyaa is-hagaajin si sahlan oo si sahlan loo heli karo badhanka badhanka sida bateriga hadda jira, korantada lacagta batteriga, soo noqnoqoshada, buzzer iwm.
Waxay ku habboon tahay adeegsadaha u baahan beddel fudud oo dhaqaale leh, oo leh rakibid iyo dejin user-saaxiibtinimo leh.
Naqshadda Tower iyo rack ayaa loo heli karaa doorashooyin kala duwan.
Heerkan kala-goynta ah ee taxanaha EP3300 TLV taxane ah, awoodda laga bilaabo 1KW-6KW, DC 12V/24V/48V, waxaa lagu dabaqi karaa dalabaadka suuqyada 110VAC/120VAC, oo u dhigma AC 110VAC/120V waji kaliya, ama laba waji 110VAC/120V 120V/240V; Muujinta LCD, waxaad dejin kartaa korantada wax soo saarka, soo noqnoqoshada, korantada ku dallacda, ku dallacaya hadda si loo naqshadeeyo adeegsiga ugu wanaagsan ee ku saleysan codsiyada culeyska kala duwan; Dhanka kale, waxaad sidoo kale xiri kartaa kontoroolaha xeedho qorraxda dheeriga ah si aad u dhisto nidaamka guriga qoraxda, u isticmaasho qorraxda si xor ah una keydiso biilasha korontada.
Taxanaha PV1800 PRO-450v/240v/110v oo ka baxsan nidaamka korantada qoraxda
PV1800PRO waa inverter/xeedho badan oo shaqaynaya, oo isku daraya shaqooyinka inverter, xeedho-qorraxda MPPT iyo xeedho bateriga si ay u siiso taageero awood aan kala go 'lahayn cabbir la qaadan karo. Taxanaha PV1800 PRO wuxuu socon karaa batari la'aan. Awoodda ugu badan ee PV ee wareegga furan wuxuu gaari karaa 500V ， iyo danab MPP waa 150 ~ 450V, kaas oo ka caawin kara macaamiisha inay si buuxda u isticmaalaan tamarta qorraxda
Kani waa beddel/shaqeeyneyaal badan, oo isku daraya shaqooyinka inverter, MPPT50A/80A xeedhaha qoraxda iyo xeedho batteriga si uu u bixiyo taageero awoodeed oo aan kala go 'lahayn oo leh cabbir la qaadan karo. Bandhigiisa LCD-ka oo dhammaystiran wuxuu bixiyaa hawlgal la-habeyn karo oo si sahlan loo heli karo hawlgalka badhanka sida bateriga hadda ku dallacaya, mudnaanta fiilooyinka AC/qoraxda, iyo danab gelinta la aqbali karo oo ku saleysan codsiyada kala duwan.
Taxanaha PV3500 waa isku-beddel shaqooyin badan leh, oo isku daraya shaqooyinka inverter iyo MPPT t xakameeyaha xejiyaha qorraxda, xeedho-qorraxda iyo xeedho batteriga si ay u siiso taageero awood aan la-tirtiri karin oo leh cabbir la qaadan karo. Bandhigga LCD-ga oo dhammaystiran wuxuu bixiyaa hawlgal la-habeyn karo oo si sahlan loo heli karo hawlgalka badhanka sida bateriga hadda ku dallacaya, mudnaanta xeedho AC/qoraxda, iyo danab gelinta la dooran karo oo ku saleysan codsiyo kala duwan.